हट देखिनको लागि सिलिकन ईम्प्लान्ट गर्ने नायिकाहरु | KalaSansar
कला / संघर्ष
हट देखिनको लागि सिलिकन ईम्प्लान्ट गर्ने नायिकाहरु
प्रियंका चोपडका बारेमा धेरै थरिका कुराहरु हुने गर्छन् कहिले उनले नाकको सर्जरी गराएकी हुन् त कहिे ओठको । उनको पहिलेको फोटो र अहिलेको फोटोहरु तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि फरक पाईन्छ । प्रियंकाले पनि हट देखिनको लागि सिलिकन ईम्प्लान्ट गराएकी हुन् ।
सधै विवादमा आईरहने नायिका पुनम पान्डेको हटनेसको त के कुरा । उनले आफ्नो लुक आकर्षक बनाउनको लागि सिलिकन ईम्प्लान्ट गरिन् । तपाँई पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।उनको पहिले र अहिलेको फोटोमा कति फरक छ ।
सनिको हटनेसमा दिवाना नहुने सायदै कोहि होलान् । उनको यो हटनेसको पछाडी एक राज छ जुन राजका कारण उनि यति हट देखिन्छीन् । त्यो राज हो सिलिकन ईम्प्लान्ट । उनले फिल्ममा आउनु भन्दा पहिले नै सिलिकन ईम्प्लान्ट गराएकी थिईन् ।
हाल करिना कपुर आफ्नो आगामी फिल्म बजरगंी भाईजानको लागि चर्चित छिन् । बलिउडमा सुरुवात गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्मका फोटोहरु हेर्ने हो भने उनमा पनि धेरै फरक पाईन्छ । जिरो फिगरवाली करिनाले सिलिकन ईम्प्लान्ट गरेर अझ हट फिगर पाएकी छिन् ।
९० को दशककी चर्चित अभिनेत्री सिल्पा सेट्टी उमेरले चालिस लागेपनि निकै नै हट देखिन्छीन् । उनि हट देखिनुको कारण योगाको साथसाथै सिलिकन ईम्प्लान्ट पनि हो ।
मर्डर गर्ल मल्लिका पनि हटनेसलाई लिएर दर्शकको बिच धेरै लोकप्रिय छिन् । उनले मोडलिंग स्ट्रगलिंगको सममयमा सिलिकन ईम्प्लान्ट गराएकी थिईन् ।त्यसपछि उनि डाईरेक्टर महेस भट्टको फिल्म मर्डर मा देखा परिन् ।
बलिउडमा प्रायजसो विवादमा रहने अभनेत्री राखि त झन् सिलिकन ईमप्लान्ट देखि पछि पर्ने कुरै भएन । आईटम गर्ल राखिले आफ्नो लुकलाई हट देखाउनको लागि निकै आकर्षक रुपले सिलिकन ईम्प्लान्ट गराएकी छिन् ।
आयशा टाकिया बलिउडका क्युट अभिनेत्रीमा पर्छिन् । उनि पनि हट अभिनेत्रीको लिस्टबाट कसरी हट्न सकछीन् र ? उनि निकै नै हट देखिन्छीन् । यसको राज हो सिलिकन ईम्प्लान्ट ।
बलिउडकी कालि सुन्दरी बिपासा बसु पहिले यति हट थिईनन् । पछि उनले हट देखिनको लागि सिलिकन ईम्प्लान्ट गराईन् ।
बिग बोसकी विजेता गौहर खान पनि हट छिन् । उनको हटनेसको राज पनि सिलिकन प्लान्ट हो ।
कृपया गाली गौलजका शब्द प्रयोग नगरिदिनु होला । अन्यथा तपाईंको प्रतिकृय प्रकाशित हुने छैन ।
सेक्सबारे खुलेर भन्न कुनै संकोच लाग्दैनः अनु लुइँटेल
© 2019 KalaSansar. All Rights Reserved. Powered by - Kala Sansar